Joe Biden oo ka tirsan Xisbiga Dimoqraadiga ayaa loogu yeeraa madaxweynaha la-doortay ee USA | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Joe Biden oo ka tirsan Xisbiga Dimoqraadiga ayaa loogu yeeraa madaxweynaha la-doortay...
Joe Biden oo ka tirsan Xisbiga Dimoqraadiga ayaa loogu yeeraa madaxweynaha la-doortay ee USA
Dalka Mareykanka, Joe Biden oo ka tirsan Xisbiga Dimoqraadiga ayaa loogu yeeraa madaxweynaha la-doortay.
Madaxweynaha la doortay waa erey qeexid oo kaliya ah ee ma ahan xafiis rasmi ah. Sidaas darteed, Biden wax awood ah kuma lahan dowladda, kumana lahaan doono illaa laga dhaariyo 20-ka January 2021, xilliga 12:00pm.
Shabakadaha wararka Mareykanka, oo la socda dhammaan tirinta codadka, ayaa 7-dii November go’aamiyey in tirada codadka uu Biden ku horreeyo ee gobolka Pennsylvania ay noqdeen kuwa aad u badan, taasi oo dhaafisay 270-ka ergo codeed ee uu u baahan yahay si uu noqdo madaxweyne.
Daqiiqado kadib markii ay go’aamiyeen in hoggaankiisa codadka ay yihiin kuwa xisaab ahaan ay xaqiiq tahay inaan lasoo qabin karin, waxay saadaaliyeen inuu ku guuleystay doorashada madaxweynaha.
Waa taas sababta hay’adaha warbaahinta, oo ay ku jirto VOA, ay Biden ugu yeerayaan “guuleystaha la saadaaliyey.”
Mararka qaar, marxaladaha aadka la isugu dhow yahay doorashada, marka ay shabakadaha wararka ay qaataan go’aankan, musharaxa kale ma qirto in laga guuleystay. Madaxweyne Donald Trump weli ma qiran sidaas, isaga oo tuhmaya qiyaameyn codad, oo aan loo hayn wax caddeymo xooggan ah, wacadna uu ku marayo inuu dagaalami doono.
Mowqifka madaxweynaha ayaa kala qeybiyey sharci-dejiyayaasha Washington, ayada oo Jamhuuriga ay taageerayaan in baaris sharci ah lagu smaeeyo tuhunnada la xiriira codadka la qiyaamay, xitaa haddii ay dhanka kale u dabaal degayaan sharci-dejiyayaasha kale ee Congress-ka ee tartamadodoa ku guuleystay.
Goorma ayaa la xallin doonaa murankan?
Doorashada Mareykanka si rasmi ah looma aqoonsan doono toddobaadyo. Sidoo kale, loolan dhanka maxkamadaha ah iyo codadka oo dib loo tiriyo ayaa dhici kara.
Illaa iyo hadda, maamulka Trump ma aysan soo bandhigin caddeymo muujinaya wax qiyaameyn codad ah, kuwaasi oo wax ka beddeli kara natiijada, hase yeeshee waxaa weli jira waqti ay loolan sharci ah ku sameyn karaan.
Marka ay gobollada si rasmi ah u aqoonsadaan doorashada, ayaa waxaa kadib kuwa wax doorta ee horey loo diyaariyey waxay bartamaha December codadkooda ka dhiiban doona nidaamka loo yaqaan Electoral College ee ah kan sida rasmiga ah loogu doorto madaxweynaha.
Congress-ka ayaa kadib si rasmi ah u aqoonsan doona natiijada codeynta Electoral College-ka horraanta bisha January, qiyaastii laba toddobaad ka hor Maalinta Dhaarinta.
Previous articleMaalmo kaddib Shiinaha oo u hambalyeeyay Madaxweynaha la doortay ee USA Biden
Next articleSaraakiisha ugu sarreysa Maleeshiyaadka TPLF oo loo jaray warqad lagu soo xirayo
Madaxweyne Qoor Qoor iyo Musharax Xasan Cali Kheyre oo shir Albaabada u Xiranyahay uga socda xarunta Kheyre
Xildhubaan Mahad Salaad Farmaaje 2016 Etoobiyaa Cadow ah ayaa Doorashada ku soo gashay maanta Kenyaa Cadow maa doonee in aad Doorasha...
Dowlada Soomaliya oo Safiirka Dalka Kenya Ceyrisay
War Deg deg ah Halkaan ka Daawo Maxamed Cabdi Yuusuf oo ku baaqay in la Xasuuqa Reer Soomalilnad
Beesha Caalamka ayaa tiri puntland dhawan ayey soomagacabaysa 8da xubnood ee kamid noqonaysa gudiyada doorashiiyonka
Xildhibaan Musdaf Dhuxuloow oo Magaalada Hargeysa lagu xiray
Masiibada ugu weyneed oo haleesha Qaxooti u tahriibayo Yurub
axmed cali - October 30, 2020 0
Sida ay xaqiijisay Qaramada Midoobay, Tahriibeyaal tiradooda lagu sheegay 140 oo ku sii jeeday qaaradda Yurub ayaa biyaha ku dhintay kaddib markii doon ay...
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo kormeeray xerada Ciidanka CXDS ee Baydhabo
Dowlada Qadar oo aqoonsatay waaliddiinta ilmo lagu tuuray qashin qub yaallay...
Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden ayaa ku guuleystay gobolka...
Madaxweyne Qoor Qoor iyo Musharax Xasan Cali Kheyre oo shir Albaabada...
axmed cali - November 29, 2020 0
Xildhubaan Mahad Salaad Farmaaje 2016 Etoobiyaa Cadow ah ayaa...
War Deg deg ah Halkaan ka Daawo Maxamed Cabdi Yuusuf oo...
Beesha Caalamka ayaa tiri puntland dhawan ayey soomagacabaysa 8da xubnood ee...
Madaxweyne oo ka hadlay Arimaha Doorashada
Cumar (Cumar finish) oo xariga ka jaray Wadadan laamiga ah oo...
Garoonka kooxda kubda cagta Roma oo laga helay bambaanooyin aan wali...
Wasiir Cabdirashiid Janan oo shegay in uu kulamo qarsoodi ah la...
Fariin ka timid Qalbi Holcay
Mohamed Bin Salman ‘oo xiriirka Israel la sugaya Madaxweyne Joe Biden
Dowladda Itooobiya oo sheegtay inay ugaarsaneyso oo ay ku raadjoogto hogaamiyayaashii...
Qabsashada Makelle iyo Halista ku soo wajahan Hargeysa
CabdirashiidJanan oosir Badan ka shifayee dhanka Farmaajo iyo Fahad
Wasiir Danish oo ka careysiiyey Muslimiinta Dalkaas ku nool
Doorashadii 2016 Soomaliland Habraaca Doorashada waxaa u diyaariyey Gudoomiyahii Baarlamaanka Jawaari
Wadamada Montenegro iyo Serbia oo xaalad adag dhextaalo..
Farmaajo, Rooble, fahad iyo Qoor Qoor oo xalay kulan gaar ah...
Ciidamada Suudaan oo ka hor istaagay shacabka ka soo Qaxay Tigray...
axmed cali - November 26, 2020 0